About Rutendo – Rutendo Mutsamwira
Rutendo ” The Queen” Mutsamwira is a versatile and multi -faceted trailblazer from Harare, Zimbabwe. She has impacted and influenced the fashion, technology, spoken word and media landscape in Zimbabwe and throughout the world. She is currently the producer and host of Undeniably African,an online Pan African lifestyle radio show on Heart and Soul Broadcasting Services which is streamed across 96 countries with a current audience reach of 950, 000 listeners.
As a model, she made national history in 2014 by becoming Zimbabwe’s first plus size runway model and has graced runways in Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, South Africa and Zambia respectively.She was recently signed to Johannesburg based talent agency Noir Models.
As a public relations and communications specialist, her work spans across corporate and public enterprises including Microsoft Middle East and Africa, Zimbabwe Fashion International , Domino Magazine and David Alford Harare. She has represented individuals and clients in France, USA, Kenya,Ghana and South Africa respectively.